Jaaliyadda Somaliland ee Toronto oo Si Weyn U Xusay 37-guuradii Kasoo Wareegtay Maalinta Shuhaadada SNM...
Monday October 18, 2021 - 06:30:40 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreeb.com)jaaliyada Somaliland ee ku dhaqan Dalka Canada, ayaa si weyn u xusay 37-guurada kasoo wareegtay maalinta shuhadada SNM oo ay sannaadkan si mug leh u xustay Jaaliyaddu.
Munaasibad Balaadhan oo casho ah, oo ay jaaliyadda caawa u qabatay xuska maalinta shuhaadada SNM, oo ku beegnayd 17-kii October 1984-kii.
Xuska 37-guuraada kasoo wareegtay, ayaa waxa kasoo qaybgalay haldoor kala duwan, Aqoonyahano, Siyaasiyiin iyo shaqsiyaad kale oo kamid ah jaaliyadda Somaliland ee Toronto.
kulankan cashada ah, waxay jaaliyaddu si gar ah ugu maamuseen Mujaahid Cali Cabdi Dheere oo kamid ahaa Halgamayaashii xaq-u-diriirka ahaa ee SNM, kuwasoo Somaliland ku xoreeyey Dhiig badan iyo Halgan adag.
Jaaliyadda Waxay Ilahay uga baryeen intii dhimatay Mujaahidta inuu Jano-fardawsa ka waraabiyo, intaa weli la daranyaysan dhaawacyadii soo gaadhay Allah caafimaad sareecan ah ha siiyo.